Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gadxiqqeessee Qaamni Ilaalu Qaama Qancarsa Wayyaaneef Bobbaafamedha. « QEERROO
November 18, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
“Utuu Sangaan hiniyyin qanceen iyyiti” jedha Oromoon. Madaan uummata Oromoo madaa sobdoonni gaafa ka’an horfanii gaafa ka’an akka saree arraaban miti. Madaa dhala namaati. Madaa titisni irra wal ariitus miti. Madaa abbaa qabudha. Madaasaarraa Titiisa ittisuun dirqama madaa’aa tokkooti. Madaan madaa wangoota wayyaaneen nyaatameef titiisni akka OPDO akka hinfayyine gochaa jirtudha. Madaa kamuu isa madeesseen hinfayyu. Abbaan madaa fayyisu madaahaa sanaaf kan madaahaan na yaala jedhee itti kennatu qofa. Har’a ba’aan uummata Oromoorra jiru dargaggoota hedduu saggoo cabsee utuu jiruu agarra. Dargaggeessa akka jaarsaa gugguufee deemutu Oromoo keessatti baay’ata. Dargaggoota kanaan “ati dullacha”jedhanii bira darbuurra ” maaltu si goophessen?” bareeda. Kun Kanaan utuu jiruu madaasaaf ba’aa uummatasaa kana addunyaatti agarsiifachuusaaf lubbuun dargaggoota kitilaa addunyaa kanarraa darbeera. Waan haxxummaa Wayyaanee bahanii balaaleffatan qofaaf, waan saamicha lafa Oromiyaa falman qofaaf doktoorota meeqatu barnoota yakkamee dirreerratti gatame? Yoo jenne lakkoofsaan oli.
Barataan har’a mana hiraarsaa jiru waan uummataaf dubbatee dantaa dhuunfaa lafa kaahee qabsoo haqaa godheef qofa akka ta’e beekuun hinulfaatu. Kanarra taree barataan lammummaa Ithiyoophiyaa guutuu didee barnoota sadarkaa olaanaa rimiddii dhabe barana dantaa mataasaa barnoota isaatti murteessuun sababa wal’aalaa ta’eef ykn sababa diinomeef utuu hintaane, jaalala biyyasaa Oromiyaa jaalalaa biyyaa abbaasaatu kanaan isa geenyaani.
Kanas ta’u sana Oromoon ilma lubbuu isaa dabarsee laatuuf horateera.Ilma gudeedaa Qeerroo Bilisummaan Adda bilisummaa Oromoof kaayyoosaa galmaan gahuuf dhaloota lubbuu hinqusannedha. Kan barbaadamus kana. Qabsoon gaafa kokkee dantaa dhuunfaa tinfa qabsoon duuchan daandii furmaataa qabatti.
Barataan yoomiyyuu qaro qabeessa hawwaasa tokkooti. Balaa uummatasaatti dhufuuf jiru dursee haawwaasa keessaa kan argu barataadha. Kanaaf qaroon hawwaasaa yoomiyyuu barataadha. Gaaffiin barataa gaaffii uummataati, gaaffiin uummataa gaaffii haqaati. Gaaffii haqaa kana micciruun gara dabaatti dabsuun hattummaadha. Hattuummaan ayyaana namarraa molqa. Qullaa nama dhaaba. Hattuun ayyaana hinqabdu,galgala dhabeettidhas.
Kaleessa gaaffii barattootaa gara gaaffii dabaatti haqaaqquuf ” barattoota barnootaan dadhabaatu hiriira nagaa baha” jechuun gartuun Harroota Tigiree OPDO uummata gowwomsaa turuunshee yaadannoo yeroo dhiyooti. Activistoota kanneen ofiin jedhan jecha boodatti hafaa OPDO ganamaa baasanii itti fayyadamuun diinummaa isaanii saaxila. Diina Oromoon ala Oromoon wal’aalaa ykn doofaa waliin jedhee akka hinbeekne beekamaadha. Har’a barataa gaaffii haqaa gaafatuun ” ati diina, ati barnootaan dadhabaadha” jechuun hattummaa siyyaasaaf luugama alatti oomishamaa jirudha. Baroota dheeraaf Tumtuun habashaa sibiila Oromoo luugamu tumuurratti yeroo dheeraa dabarsu. Sunis Oromoo luugamanii sakaallaa jabaan sakaalaanii bituu waan dheebotaniifi. Sibiila sibiilaan akkuma muran Oromoo Oromoon luugamuuf Oromoo gantuuf galtuu abidda siyyaasaa isaaniitiin diimessanii tumu, moroda arraba isaaniin morodanii uummatatti lakkisu. Galtuuf gantuun erga tumamtee morodamtee baatee booda shabashaba ilmaan Oromoo haxooftee lafarraa fixuutti fuulleeffatti.
Sibilli Habashaan Oomishu kun hanga ammaatti gosaan tokko ta’ee maqaa jijjiirratee akka gaararraa jalqaba Oromoo fakkaatee Oromootti dhufaa tureera. Haaluma Kanaan Tumamuun OPDO waggaa 27 duraa hanga har’aa akka wayyaaneen dhiiga keenya dhangalaasaa umurii dheeraffattu ta’eera. Buchulloonni OPDO kunneen gaafa ka’an madaa uummataa cunfatanii nyaatu, gaafa ka’an immoo madaa uummataa arrabaani godaannisa uummatatti kakkaasuun haaraa godhanii madeessu. Kanarratti bara 2014 keessa Qeerroo bilisummaa Oromootiin walleen ilmaan habashaa diinummaa isaanii lallabu bahee ture. Walleen sun “…minilik nuuf diina, gochasaa nii beekna” kan jedhu ture. Walleen Aanoleef calanqoo haalaan yaadatu ture. Uummatnis barataan barsiisaan martuu jaallatee gocha Minilik badaa sana waliin gahee odeeffate. Warri seenaa hinbeekne kanneen booji’amtoonni Dargii arcaatuwwan Darguu baruma sanarraa qabanii “Siidaa aanolee dhaabna” jechuun onnee uummataa karaa sanaan saqatanii seenuuf abbalan. Siidaan sun dhaabbatee utuu hinturin ammoo deebi’anii “nuti warra tokko jechuun warra gumaa faana wal jala fiiguu qabani. Irra darbaniiyyuu qe’ee warra gumaa seenanii soorratanii dhuganii galan. Kun falfala. Gocha akkasiin Oromoon falfala jedhee waama.
Akkaasuma ji’oota muraasa dura, warraaqas dinagdee jechuun maqaa ” Odaa Baasii” jedhu kaamphaanii konkolaataa akka banuuf jedhan gurra uummatarraa ciraa turan. Sanammoo jijim godhanii ammammoo maqaa “Tokkummaa” jedhuun uummataa afaan fajjessuu irratti argamu. Warra waan hinjirreen oduun nama quubsu kanarratti uummanni akka dammaqe wal’aaluun isaanituu gowwummaadha.
Qabsoon Qeerroo bilisummaa gadxiqqeessee qaamni ilaalu qaama qancarsa wayyaaneef bobbaafamedha. Qeerroon Bilisummaa diina addatti qabu Wayyaaneef garboonfattoota ilmaan Tigiree TPLF qofarratti fuulleffatee garbummaa hundeen buqqaasuuf jaamiyaa waantoota gurguddaa gochaa tureef sochii jabaarra jirudha. Sochi Jaarmiyaa Qeerroo dura dhaabbachuuf wal shakkii Qeerroo Bilisummaa gidduutti uumuuf socho’uun diinummaadha. Walshakkiin qabsoo uummataa Oromoo keessatti miidhaa hangam akka fidaa ture dagachuu hindandeenyu.
Waan ta’eef qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoof sochii barattootaa dabsanii “hiriira diinati, kan barattootni dadhaboon wacanii hiriira baasanidha” jechuun qabsoo uummataa gad xiqqeessudha, qabsoo uummataa xiqqeessuun of xiqqeessudha. “Teessuma ulfinaa abbatu of jala baata” jedhu. Namoota kabaja gaafa argattan lafa teenya malee jettaniif akka of qusattan himuun fedha.
Maayirratti qabsoon biyya kam keessattuu akka qabsoo Oromoo belbelee fiilee boba’ee dhaame hinjiru. Kanaaf qabsoo kana dhaamsinaan of gowwomsuudha. Qabsoon uummataa ammaa hanga Bilisummaa uummataa Oromoof saboota Cunqurfamoo impayeera biyyattii mirkaneessutti hindhaabbatu.
« Dararaan Oromoo Irratti Lakkuu Ta’aa Jira, Oromoon Lafasaarraa Buqqaafame Sharaa Baqattummaaf Keessa Buufate Keessaa Wayyaaneen Qabdee Hidhaa Jirti.
Mooraa Mattuu Yuunibarsiitii Keessatti, Gocha Badaa Moorichi Xaxeen Gaaffii Barattootaa Gara Waldhabiinsa Sabaatti Jijjiiruuf Akeekamuutti Akka Jiru Gabaafame »